Simone Zaza oo go’aamiyay mustaqbalkiisa Juventus (Muxuu yiri?) – Gool FM
Simone Zaza oo go’aamiyay mustaqbalkiisa Juventus (Muxuu yiri?)
(Turin) 20 Juunyo 2016 Weerar yahanka xulka talyaaniga iyo kooxda Juventus Simone Zaza ayaa go’aamiyay mustaqbalkiisa kooxda macalin Allegri kadib markii uu boos joogto ah ka waayay xiliciyaareedkii hore.
Simone Zaza ayaa sheegay in waqtigaan uu xooga saarayo waajibaadkiisa xulka qaranka isaga oo indhaha ka dabooshay dalabyada waalida ah ee uga imaanaya horyaalka ingiriiska.
“Inbadan ma ciyaarin ilaa haatan laakiin taas uma aabayeelayo, kaliya diyaar ayaan ahaan doonaa marka uu tababaruhu iga codsado inaan ciyaaro si lamid ah kulankii Sweden markaas oo aan caawiyay goolka guusha” ayuu yiri Simone Zaza.
“Hadafkaygu waa inaan iska sii joogaa Juventus laakiin wax walbo waxaan qiimayn doonaa kadib dhamaadka Euro, laakiin haatan ma jirto wax kale oo aan ku fikirayo”.
“Waxaan rajaynayaa inaan ku soo bilowdo kulanka Ireland, laakiin ugu danbayntii waxaa faan ii ah inaan ka mid ahay ciyaartoyda xulka qaranka”.
“Kalama jecli inaan ciyaaro 90 daqiiqo ama 5 daqiiqo, taas ima mashquulinayso”.
EEG: Waa SHAXDA laga yaabo inuu caawa la soo shir tago xulka England..(6-badel ayaa la sameeyay oo uu ku jiro kabtan Rooney)